Elizabeth Anweis dia nanatevin-daharana ny mpilalao an'i Echo 3 ho an'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, hitantsika ny fomba nivoaran'ny tetikasa iray izay toa narian'ny Apple (ny daty voalohany sy farany tamin'ny Jolay 2020). Miresaka momba ny andian-tantara ho an'ny Apple TV + Echo 3 izahay, andiany iray izay hitifitra amin'ny teny espaniola sy anglisy.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia lasa ireo mpamokatra an'ity andiany ity manamafy ireo mpilalao fototra amin'ity tantara ity: Luke ewans y Michael Huisman. Ireto mpilalao roa ireto izao dia tafaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika Elizabeth Anweis.
Averina eo afovoany indray io Fe-potoana, izay nanamafy ny sonian'ny mpilalao sarimihetsika Elizabeth Anweis ao amin'ny Apple TV. Anweis dia hitana ny andraikitr'i Natalie Foster, lehiben'ny asa ao amin'ny CIA any Bogotá. Ao ambadik'ity andiany ity no ahitantsika an'i Mark Boal, mpanoratra amin'ny horonantsary an'i En Tierra Hostile an'i Kathryn Biguelow.
ny mifototra amin'ny andiany israeli Rehefa manidina ny mahery fo (azo jerena ao amin'ny Netflix), mifototra amin'ny ilay tantara mitondra ny anarana mitovy nosoratan'i Amir Gutfreund.
Echo 3 dia hapetraka any Amerika atsimo ary hanaraka an'i Amber Chesborough, tanora mpahay siansa marani-tsaina izay manjavona eo amin'ny sisintanin'i Kolombia sy Venezoela. Ny rahalahiny Bambi (Luke Evans) sy ny vadiny (nolalaovan'i Michiel Huisman) miaraka amin'ny traikefa miaramila no manapa-kevitra fitsangatsanganana hitady azy amin'ny tantara an-tsehatra miaraka amina fiafenana ady miafina.
Elizabeth Anweis, fantatra amin'ny andiany Westworld, Batwoman. Niseho koa izy io tao amin'ny toko samihafa ao amin'ny NCIS: Los Angeles, 9-1-1, The Affair, Pejin-Twin, Anatomy an'i Grey, rizzoli & Nosy, fialan-tsiny, Los de Angeles: Distrikan'ny heloka bevava...
Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra hoe rahoviana no hanomboka ny famokarana, ka mifototra amin'io daty io, betsaka na latsaka no ahafahantsika mahazo ny fahitana ny fizarana voalohany amin'ity. andian-toko 10.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Nanatevin-daharana ny mpilalao Echo 3 ho an'ny Apple TV + i Elizabeth Anweis
Ny Apple Watch Series 6 dia miditra amin'ny faritra namboarin'i Apple